स्वास्थ्यको सूत्र : के तपाईँलाई पानी पिउने तरिका थाहा छ ?
Sunday, 20 May, 2018 11:43 AM
डाक्टर, रमेश पुरी
मावन शरीरमा पानीको मात्रा
मानव शरीरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थान वायुको छ । वायुबाट नै हामीलाई अक्सिजन मिल्छ र शरीरका सम्पूर्ण क्रिया सुचारु हुन्छन् । वायुपछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ पानी । मानव शरीरको कुल तौलमध्ये पानीको मात्रा ७० प्रतिशत हुन्छ । अलग–अलगरुपमा हेर्ने हो भने, मस्तिष्कमा ९०, रगतमा ८३, मांसेशिमा ७०, हड्डीमा २० र शरीरको सबैभन्दा कठोरमध्येको दाँतमा पनि १० प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । पानीविना शरीरको कुनै पनि अंगले काम गर्दैन । शरीरमा २६ लाख करोड कोशिकाहरु हुन्छन् । प्रत्येक कोशिकालाई अक्सिनज र पानीको आवश्यकता पर्दछ । पानीविना हामीले श्वास पनि लिन सक्दैनौ नत भोजनको पाचन नै सम्भव छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीमध्ये धेरैलाई पानीको महत्व र गुणबारे निकै थोरै मात्र जानकारी छ । पश्चिमाहरु त विस्तारै–विस्तारै पानी पिउन भुल्दै गएका छन् । यताका मान्छेहरुमा पनि उस्तै समस्या देखिन थालेको छ । पुरादिन एयरकन्डिसनयुक्त घर, अफिस र कारमा बस्दाबस्दै हामीहरु पानी पिउन पनि भुल्दैछौं । त्यसको सट्टामा कोकाकोला, चिया, कफी हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् ।
पानीको कमिले देखिने समस्या
हाम्रो शरीरबाट दैनिक लगभग चारदेखि ५ लिटर पानी बाहिर निस्कन्छ । पिसाव, पसिना र स्वासको माध्यमबाट । यसको पूर्ति गर्नु पनि निकै आवश्यक छ । हाम्रो शरीरमा दिनहुँ रसहरु बन्ने गर्दछ । मुखमा २ लिटर ¥याल, कलेजोमा १ लिटर पित्तरस, पैन्क्रियाजमा एक लिटर पाचकरस इत्यादि । पानीबाट नै यी रसहरुको उत्पत्ति हुन्छ । सबै हार्मोन र अन्य ग्रन्थि पानीको सहयोगमा नै काम गर्दछन् । पानीको कमि भयोभने रगत बाक्लो हुन्छ । कोलेस्ट्रोल बढ्छ । उच्च रक्तचाप र मुटु रोगको जन्म हुन्छ । पानीको कमि हुँदा आन्द्राले पनि सहिरुपमा काम गर्न सक्दैन जसका कारण पेटको सफाइ हुन पाउँदैन । यसको अलावा, छाला र मांसपेशिमा कडापन, सोराइसिस, विविरा आउनु, शरीरमा कान्ति नहुनुजस्ता लक्षण पानीको अभावमा देखिने गर्छ । त्यसैगरि यूरिक एसिड बढ्नु, कब्जियत, पत्थरीको समस्या पनि देखिन्छ । यत्ति मात्र होइन पानीको कमिले मानसिक असन्तुलन पनि पैदा हुन्छ । मानसिक तनाव, उत्तेजना र चाँडै रिस उठ्ने हुन्छ ।
हामीलाई पानी पिउन आउँदैन
एक त हामी पानी निकै कम पिउँछौ । दोस्रो हामीलाई सहि तरिकाले पानी पिउन पनि आउँदैन । प्रायजसो मान्छेहरु उभ्भिएर पानी पिउँछन् त्यो पनि निकै हतारमा । हामीले पानी पिउँदा त्यो मुख, घाँटी हुँदै भोजन नलीमा जान्छ । घाँटीमा अनेक नसाहरुको जालो छ । यहाँ भोजननली, श्वासनली, कान, नाक सँग जोडिएको नसा, ध्वनी यन्त्र, थायरायड ग्रन्थि सबै छन् । हामीले उभ्भिएर हतारमा पानी पिउँदा स्वासनलिमा पनि छिर्न सक्छ । त्यो मृत्युको लागि पर्याप्त हुन्छ । यसका अलावा हाम्रो आँखा, नाक, कानमा पनि अनावश्यक दवावपर्छ । जव हामी उम्भिएर पानी पिउँछौ त्यतिवेला आमाशयमा सिधा दवावपर्छ । त्यसको असर आमाशयमा मात्र सिमित नभए सानो र ठूलो आन्द्रासम्म पुग्छ । यी अंगहरुले ठिकढंगले पानीलाई सोस्न सक्दैनन् ।
घुँडाको दुःखाई, ग्यास्ट्रिक र एसिडिडी हुनको प्रमुख कारण हो, उभ्भिएर पानी पिउनु । हाम्रा जोर्नीहरुलाई पनि पानीको आवश्यकता पर्दछ । जोर्नीहरुमका ‘साइनोवियल’ भन्ने पदार्थ हुन्छ । हामीले घटघट पानी पिउँदा त्यो पदार्थ वगेर जान्छ, अनि जोर्नीहरु सुक्खा हुन थाल्छन् । बसेर थोरै–थोरै घुटकी लिँदै पानी पिउने बानीले प्रत्येक कोशलाई सिंचन गर्न मद्यत गर्दछ । यसले कोशहरुलाई पुनर्जीवित गर्छ । यदि हामी बसेर विस्तारै–विस्तारै पिउने हो भने पानीले एक उत्तम औषधीले झैं काम गर्छ । हाम्रो मुखमा कयौं ¥याल ग्रन्थिहरु छन् । जसले दिनमा २ लिटर ¥याल उत्पादन गर्छन । यही ¥यालले नै हाम्रो भोजनको अम्लतालाई समाप्त पार्छ । जव ¥याल पानीमा मिसिन्छ तब त्यो महाऔषधी बन्छ । यसले रगतलाई क्षारीय बनाउँछ । हाम्रो रगतको ८० प्रतिशत भाग क्षारीय र २० प्रतिशत भाग अम्लिय हुन्छ । रगतको यो अनुपात विग्रियो भने हामीलाई रोग लाग्न थाल्छ । दिनमा आठदेखि दश ग्लास पानी बसेर घुटुघुटु पिउने हो भने रक्त शुद्विमा ठूलो सहयोग पुग्छ । मानसिक तनाबबाट बच्ने सरल उपाय हो–पानी पिउनु । यसले मस्तिष्कलाई क्रियाशील बनाउँछ । स्मरण शक्ति बढ्छ र मानसिक थकाइ हुन दिँदैन ।
कस्तो पानी ! कसरी पिउने ?
माटोको भाँडोमा राखिएको पानीको गुण सर्वश्रेष्ठ हुन्छ । माटोको भाँडोमा राखिएको पानी आँफै पनि शुद्व हुँदै जान्छ । यसमा पृथ्वी तत्वको सबै पोषक गुण आउँछ । माटोको भाँडोमा राखिएको पानीमा तुलसी, पुदिना या निमको पात केहीबेर राखिदिने हो भने त्यसले पानीको गुणस्तरमा बृद्वि गर्छ । गर्मीको समयमा माटोको भाँडोमा राखेको पानी स्वादिलो हुन्छ । भोजनको एक घण्टा पहिला या पछि पानी पिउनुपर्छ । यदि भोजनको साथ पानी पिउने नै हो भने मनतातो पानी प्रयोग गर्नुपर्छ । भोजनको साथ चिसो पानी पिउँदा जठराग्नि मंद हुन्छ । हामीले खाएको भोजन पचाउन आमाशयमा हाईड्रोक्लोरिक एसिड बन्नुपर्छ । तत्काल पानी पिउँदा यो पातलो हुन्छ अनि हामीलाई पाचन सम्बन्धि रोग लाग्न थाल्छ । यदि तपाई स्वास्थ र तन्दुरुस्त हुन चाहनुहुन्छ भने दैनिक ३ देखि ४ लिटर पानी पिउने गर्नुहोस । उठेर होइन बसेर अनि हतारमा होइन विस्तारै ।